About us - Xuzhou Jiufa Ukwakhiwa Imishini Co., Ltd.
Isungulwe ngo-2002, i-Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). ibhizinisi elinamasheya enhlokodolobha yokutshala imali engu-RMB16 million. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engama-square metres ayizinkulungwane ezingama-53, izinkulungwane ezingama-38 zazo ezenzelwe imihlangano yokufundisana. Sinezikhungo ezingaphezu kwezingama-260 ezintsha sha nezithuthukile. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni izakhiwo ezinkulu zemishini yokwakha futhi amandla ethu okukhiqiza wonyaka ngamathani ayizinkulungwane ezingama-20. Imishini yobuchwepheshe obuphezulu yokulawulwa kwamanani, i-welding, i-forging kanye nokwelashwa kokushisa iyasetshenziswa enqubweni yokukhiqiza kwethu. Imikhiqizo eyinhloko ye-XJCM i-crane yasemgwaqeni onolaka, i-truck crane, i-self -erecting tower crane, i-pipelayer esebenza ngemisebenzi eminingi kanye nezingxenye eziningi zemishini yokwakha. Ngokuqinisekile zisezingeni elijwayelekile.
XJCM ingenye umphakeli yokuncintisana futhi omuhle kakhulu XCMG. Sinikezela ngamabhakede we-excavator, amabhakede we-loader, izingalo ze-rocker, izibopho, ama-booms, amafreyimu angaphambili, amafreyimu angemuva, ama-pin roll neminye imikhiqizo ehlobene ne-XCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG nezinye izinkampani eziningi zemishini ezidumile eChina. Ama-crane ethu ochungechunge we-RT, ama-crane e-QY eloli yochungechunge kanye nama-cranes e-JFYT ochungechunge athunyelwa eNyakatho Melika. INingizimu Melika, i-Afrika, iMpumalanga Ephakathi, iNtshonalanga ye-Asia, i-Southeast Asia namanye amazwe angaphezu kwezi-30 nezifunda.
Iklayenti lethu: • I-Diamond Projects Malta • I-AGRO ACCESSORIES (NZ) LIMITED • I-Avsrya Construction • IBALBANS GROUP & INVESTMENT LTD. • ISWISS GRADE CONSULT LIMITED • ISAMAD RESOURCES LTD. • ITayo Propert Mamagements Ltd.
Imishini yokwakha ibhizinisi
Ngamandla aqinile nesakhiwo sokuphatha ezinkampani esiphelele, inkampani ibhalise ngempumelelo e-Jiangsu Equity Exchange Center futhi yaba yilungu lemakethe yokuhweba ngokulingana. Phakathi kwabo, i-DGY series ipayipi elisebenza ngezinto eziningi kanye nemoto yokuzihambisa indle ezitholele yona iwine amalungelo obunikazi wokusungulwa komhlaba. I-JFYT chungechunge lokuhamba okuzenzakalelayo lokuzakhela u-crane ohlakaniphile ngumkhiqizo wokuqala e-China. I- "RT series off-road crane" icwaningwe ngokuzimela futhi yathuthukiswa yile nkampani yamukelwa "njengomkhiqizo osezingeni eliphakeme" nguMnyango Wezesayensi Nobuchwepheshe esifundazweni saseJiangsu futhi yafakwa ohlwini ku "National Torch Plan Industrialization Demonstration Project" nguMnyango weSayensi Nobuchwepheshe.
• Kusukela yasungulwa, inkampani isetshenziswe ngokulandelana ekutshaleni nasekusebenziseni imishini yokuthuthuka, futhi inenhlangano yokukhiqiza namandla okucubungula amasethi angaphezu kuka-3,000 emishini yokwakha emikhulu nemishini.
2500T CNC eguqa umshini
Umshini omkhulu oyisidina
• Eminye imishini efana nemishini yokusika i-laser, umshini omuhle wokusika i-plasma, umshini wokubhoboza phansi nowokugaya.
Umshini wokusika we-plasma we-CNC
Umshini wokusika we-laser we-CNC
• Umtshina wokuxhumanisa okuthathu, umtshina wesici sokushisela, njll., Konke okuyimishini esezingeni eliphakeme kakhulu eChina.
Ukushisela okuzenzakalelayo kwe-Gantry
Umtshina wokuxhumanisa amathathu
Le nkampani inohlelo oluphelele lokulawulwa kwekhwalithi yezobuchwepheshe, futhi yadlulisa uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini kanye nesitifiketi se-CE, isitifiketi se-GOST. Njengamanje, inkampani inezobuchwepheshe obunamalungelo obunikazi obungama-56, kufaka phakathi amalungelo obunikazi bokusungula ayi-15 namalungelo obunikazi bemodeli wokusetshenziswa angama-41.
Le nkampani ihlanganisa ubuchwepheshe, inhlokodolobha, amathalente, izingxenye zesakhiwo, futhi ithatha imboni njengomthwalo wemfanelo, ukwethembeka, ikhwalithi njengezimpande, futhi ibuyisela umphakathi ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme yemishini yobunjiniyela!